Venezoela: Trano Famoahamboky Mamoaka Asa Soratra Anaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 20:37 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Português, македонски, English
Misy vaovao tsara ho an'ireo izay mianatra teny Espaniôla sy ho an'ireo mpankafy ny literatiora amin'ny teny Espaniôla. Noho ny fandraisana andraikitra avy amin'ny Minisitry ny Kolontsaina Venezoeliana, dia efa azo alaina maimaimpoana ao anaty aterineto ny asa soratra avy amin'ny trano famoahamboky Ayacucho Library [es]. Efa volana maromaro izay no afaka mijery sy maka karazanà asa soratra espaniola maro hita amin'ny endrika .pdf ireo bilaogera sy ireo hafa mpankafy literatiora. Faly ireo bilaogera manoloana ny safidy ananany sy amin’ny fahafahan’ny mpamaky boky misintona izany.
Milaza ny Departamento de Lengua [es] fa:
Manana ny iray amin'ireo lisitra tena mahaliana indrindra ny trano famoahamboky Venezoeliana Ayacucho – sady vokatry ny hatsaran'ireo asa soratra ara-literatiora navoakany no vokatry ny isan'ny asa soratra hita ao – amin'ny literatiora Hispano-Amerikana manerana izao tontolo izao. Avy any amin'ireo fomban-drazana ka hatrany amin'ireo tantara tamin'ny taonjato faha-20; avy any amin'ny asa soratry ny Amiraly Columbus ka hatrany amin'ny fanehoankevitr’ilay Inca Garcilazo.
Mahatsiaro ny nilàna ny dika bokikely an'ireny asa soratra ireny tanatin'ny fanabeazana azy i Actualidad Literatura [es] :
Ampahany betsaka amin'ireo klasika fanta-daza amin'ny literatiora Hispanika-Amerikana no navoakan’ny Biblioteca Ayacucho nandritra izay 33 taona farany izay. Ireo mpampianatra literatiora ahy ohatra, dia nanaja azy ireo, ary tsoriko fa betsaka ny zavatra nianarako tamin'ireo boky ireo.
Manome lisitr'ireo Asa Soratra izay hitantsika ato amin'ity tranomboky ity i Papelón Con Limón [es]:
Ny fotompampianaran'i Simon Bolivar, La Vorágine an’i José Eustasio Rivera, ny Cien tradiciones peruanas an’i Ricardo Palma, ny tononkalon’i Rubén Darío, ny Nuestra America an’i José Martí, ny María an’i Jorge Isaacs, ireo Tantara fohy nosoratan'i Horacio Quiroga.